Ake Sithi Qaphu Qaphu Nge-Indonesia—Inkolo, Izwe, Abantu
Izwe I-Indonesia iphakathi kwe-Australia nezwekazi lase-Asia futhi iyiqoqo leziqhingi elikhulu kunazo zonke emhlabeni. Iningi leziqhingi zakhona ezingaphezu kuka-17 500 linezintaba ezingamagebhugebhu namahlathi acinene. Njengoba inezintaba-mlilo ezingaphezu kwekhulu eziqhumayo, yilona zwe elinezintaba-mlilo eziningi eziqhumayo emhlabeni.
Abantu I-Indonesia iyizwe lesine elinabantu abaningi kakhulu emhlabeni (ilandela iChina, i-India ne-United States) futhi kunamaqembu abantu bomdabu angaphezu kuka-300. Abantu abangaphezu kwesigamu bayizizwe zamaJava namaSundane.
Inkolo Abantu balapha abangamaphesenti angaphezu kuka-90 bangamaSulumane. Abanye bangamaHindu, amaBuddha noma amaKristu okuzisholo. Abantu abaningi balandela nezinkolo zendabuko.
Ulimi Kuso sonke isiqhingi kukhulunywa izilimi ezingaphezu kuka-700. Ulimi olusetshenziswa yizo zonke izinhlanga isi-Indonesia, esisuselwa olimini lwesiMalay. Iningi labantu likhuluma ulimi lwendawo emakhaya.
Indlela yokuziphilisa Abantu abaningi bangabalimi noma abahwebi. Leli zwe linothile ngezinto ezimbiwa phansi, izihlahla, uwoyela ongahluziwe negesi futhi lithumela injoloba nowoyela wesundu kwamanye amazwe.
Ukudla Ilayisi liwukudla okudliwa kakhulu. Ukudla okuthandwa kakhulu i-nasi goréng (ilayisi elithosiwe elinamaqanda nemifino), i-satay (inyama echonywe othini yayisiyosiwa) ne-gado-gado (isaladi enesosi yamantongomane).
Isimo sezulu Kuyashisa futhi kunomswakama. Imimoya eyisishingishane yenza kube nezinkathi zonyaka ezimbili—inkathi enemvula neyomile. Iziphepho ezihambisana nokuduma nemvula zivamile.
INANI LABAMEMEZELI NGO-2015
UMMEMEZELI OYEDWA KUMELWE ASHUMAYEZE ABANTU ABANGU
INANI LABABEKHONA ESIKHUMBUZWENI NGO-2015